Fitateram-bahoaka any Singapore
Tao Singapore, tena nieritreritra sy nanangana rafitra fitateram-bahoaka. Amin'ny ankapobeny, raha toa ianao manomana fitsangatsanganana any amin'ny toerana rehetra ao an-tanàna, eo am-pelatananao dia misy safidy maromaro ny fomba hanaovana izany. Ny fitateram-bahoaka any Singapore dia asehon'ny metro, buses ary taxis. Azo antoka fa ilaina ny manome bisy sy sambo mpizahatany.
Metro any Singapore
Metro any Singapore dia modely maoderina sy haingam-pandeha, izay ahafahanao mahatratra ny ankamaroan'ny toerana any amin'ny firenena. Ny metro metro dia misy tsipika lehibe 4 ary iray eo akaikiny: Line East Line (Green Line), avaratra andrefana (miloko volomparasy), avaratry ny faritra Atsimo-Atsinanana (miloko mena), lala afovoany (jiro mavo) ary natao hametrahana ny mpandeha amin'ny làlan'ny metro lehibe.
Ny saran-dàlana dia avy amin'ny 1.5 hatramin'ny 4 Singapore dollars. Ny loka dia miankina amin'ny halavirana handehananao.
Ary, mazava ho azy, ny mpizaha tany dia liana foana amin'ny fanontaniana, izay ijeren'ny tobim-pampielezam-paritra ao Singapore. Amin'ny faran'ny herinandro, afaka mampiasa azy ireo ianao hatramin'ny 5.30 ka hatramin'ny misasakalina, ary amin'ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra - hatramin'ny 6.00 sy hatramin'ny misasakalina.
Buses any Singapore
Ny rafitra fitaterana an'habakabaka ao Singapore koa dia mivoatra tsara. Afaka mividy fiara fitaterana bus amin'ny bus ianao.
Ny sandan'ny saran-dalan'ny bus iray ho an'ny Singapore dia avy amin'ny 0,5 ka hatramin'ny 1.1 dolara any Singapore. Ny loka dia miankina amin'ny halavirana sy ny fahazoana ny rivotra iainana ao anaty bus. Afaka mandoa ny saran-dalana amin'ny bus ianao amin'ny fidirana amin'ny vola mampiasa fitaovana manokana na mampiasa ny Travel Pass na Ez-Link mandeha karatra, raha manana izany ianao. Rehefa manitsy vola ianao, tadidio fa tsy manova fiovana ny milina, noho izany dia tsara ny manangona vola madinika.
Ny bus dia mihazakazaka manodidina an'i Singapore nanomboka tamin'ny 5.30 ary hatramin'ny misasakalina.
Ny taxi any Singapore dia heverina ho karazana fitateram-pandeha izay mety hitondra anao any amin'ny toerana iray amin'ny vidiny be indrindra. Ny vidiny dia ny vidin'ny fandefasana taxi (3 ka hatramin'ny 5 dolara Singapore, ny loka dia miankina amin'ny saran'ny fiara) sy ny saran-dalana araka ny taxi. Ny kilaometatra isaky ny vidin'ny 50 isa. Misy, mazava ho azy, ary ny saram-pividianana isan-karazany amin'ny vidiny, ohatra, amin'ny alina na ora maivana na rehefa mandeha amin'ny faritra afovoan-tanàna.
Taxi dia mora azo eny an-dalambe, ary azonao atao koa ny miantso amin'ny telefaona: 6342 5222, 6552 1111, 6363 6888 ary ny hafa. Na izany aza, ny fiantsoana ao amin'ny efitrano fanaraha-maso dia homena ihany koa - 2.5 hatramin'ny 8 dolara Singapore - ny lany dia miankina amin'ny saran'ny fiara.
Safidy iray lehibe hafa dia fiaramanidina amin'ny renirano Singaporo amin'ny sambo. Ny faharetan'ny fiaramanidina toy izany dia 40 minitra. Azonao atao ny mankafy ny fomba fijery ny teatra ao amin'ny Esplanade Theater , ilay kodiarana Ferris , mankasitraka lavitra ny fisehon'ny sarivongana Merlion sy ireo panoramasiana hafa manokatra ny tanàna.
Ny sambo dia miala amin'ny toeram-pivarotana eo amin'ny kilaon'ny Bot Ki sy ny Robertson Key ary avy amin'ny valan-tseranana Merlion nanomboka tamin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 10 alina. Ny saran-dalan'ny fitaterana dia 22 Singapore dolara, ho an'ny ankizy - 12 taona.
Ao Singapore dia misy fiara fitateram-pahefana avo roa-decker izay hitondra anao any amin'ny toerana maro mahaliana ny firenena. Miasa amin'ny lalana telo samy hafa izy ireo. Misy koa fiara fitateram-bahoaka mahazatra-amphibians, hosodoko eo ambanin'ny duck. Ny làlany dia mihazakazaka mankany Clarke Quay , ary avy eo dia midina eo amin'ny rano ilay fiara ary mivezivezy mandritra ny adiny iray amin'ny renirano.
Ny sandan'ny tapakila amin'ireto fiara fitaterana ireto dia 33 Singapore Singapore, ho an'ny ankizy - 22. Nalefa izy ireo tamin'ny 10.00 hatramin'ny 18.00 avy amin'ny tranobe fandraisam-bahiny Suntec City Tower (5, Temasek Blvd).
Noho izany, ny foto-drafitrasa fitaterana malaza dia hanamora ny fitsangantsanganana haingana sy mahafinaritra avy amin'ny tranokala iray ho an'ny hafa ary hankafy ny fotoananao any amin'ny firenena.
Tendrombohitra any Korea
Laôs - zohy
Maldives - lakozia
Resaka ao Malezia
Inona no tokony hijerena any Singapore?
Ny lovantsofin'i Kambodza
Maldives - moske
Myanmar - toetrandro
Volkano any Indonezia
Korea Atsimo - kianja am-pihinanana
Amin'ny firy no tsara kokoa ny mankany Japon?
Wedding ao amin'ny Maldives
Nepal - fitsangatsanganana
Ahoana ny fifandraisana amin'ny fitaovana elektronika?
Tatoavina vonjimaika ao an-trano
Naked Kate Moss nanolotra firavaka noforonina amin'ny endriny manokana
Inona no asehon'ny olona?
Beige mitafy eo amin'ny tany
Iza amin'ireo tsipika no tsara kokoa ho an'ny trimmer?
Actor Clay Adler, ankizivavy Jennifer Lawrence, namono tena tamin'ny faha-27 taonany
Ny akanjo teny amin'ny gorodona - hariva, isan'andro, ary tsy hoe!
Plasticine amin'ny tananay
Vavaka alohan'ny fiombonana sy ny fiaiken-keloka
Ahoana no ahafahana manala cent centres ao an-trano?
Sakafo mena any anaty saosy tazo
Ny aretina pharyngitis - fitsaboana
Tavoahangy vita - voatokana
Ny metastazy ao amin'ny havokavoka
Matthew McConaughey dia tonga mpampianatra tao amin'ny Oniversiten'i Texas
Kutaby miaraka amin'ny voly - sakafo mahavoky ny sakafo Azerbaijani Azerbaijani
Melanie Griffith: "Te hankafy ny fiainana aho!"
Ahoana no hisafidianana rindrina ho an'ny lakozia?
Plum jam napetraka - recipe
Dresses avy amin'i Angelica Varum